Semalt: Famafana Spam amin'ny tranokala WordPress
Raha hitanao ny fampitomboana ny fomba fijery sasany ao amin'ny tranonkalanao tsy misy SEO, dia misy ny vintana noho ianao lasa niharam-boina amin'ny tranonkalan'ny fitsaboana toy ny webmasters.com sy trafficmonetize.org. Ny tranonkala toy izany dia mandefa mpitsoa-ponenana malaza amin'ny tranokalanao ary mamorona hadisoana ao amin'ny data Google Analytics.
Lasa olana lehibe ho an'ny webmasters ny spam referans. Raha tsy fantatrao io fehezanteny io, Andrew Dyhan, manam-pahaizana matihanina Semalt , dia manamafy fa fifamoivoizana amin'ny spiders sy bots izay mampiseho ny famangiana marobe amin'ny data Google Analytics.
Satria tsy olombelona izy ireo ary tsy liana amin'ny votoatiny, dia tsy ho afaka hitarika ny fitarihana miaraka amin'ny spam referral ianao ary tsy afaka mitantana ny raharaham-barotra amim-pahombiazana amin'ny aterineto. Ny traikefa pseudo dia natao hanehoana fitsapana maro ao amin'ny Google Analytics, saingy ny taham-pidirana dia avo ampidinina.
Atsaharo ny fanamarinana ny tranonkala WordPress
Ilaina ny fandefasana spam referral ao amin'ny Google Analytics raha te hanana raharaham-barotra mahomby amin'ny aterineto ianao. Tokony hotakinao ao amin'ny tranonkalanao WordPress izany. Noho izany dia tokony hitadidy zavatra vitsivitsy ianao. Ireo plugin-spam references dia natao hanakanana ireo bots / andian-tsoratra fantatra amin'ny WordPress, ka mamonjy fotoana maro amin'ny webmasters. Azonao atao ny mampifanitsy sy manitsy ny sehatra amin'ny sehatr'asanao ary manaisotra ilay fahadisoana 403 mety hiteraka olana maro ho an'ny tranokalanao.
Inona no atao hoe "Spam referendum"?
Spam referral, araka ny efa voalaza, dia bots and spiders izay namely ny tranonkalanao ary miezaka mamorona rindranasa ho anao amin'ny mombamomba azy tsy tena izy. Miditra ao amin'ny tranokalanao izy ireo ary miteraka olana maro. Noho izany dia zava-dehibe ny manakana azy ireo amin'ny Google Analytics sy WordPress. Here are the easy ways to deal with spamming and bots of referrals.
1. Ampiasao ireo rakitra htaccess
Azonao atao ny mampiasa ny .htaccess rakitra mba hanakanana sy hanesorana azy ireo amin'ny tranokalanao. Izany dia fomba mahavonjy fotoana ary manome tombontsoa be ho an'ny webmasters. Raha toa ianao ka vaovao amin'ny Google Analytics dia tokony manokatra ny kaontinao ianao ary mamaky ny momba ny fitsipika sy fitsipika htaccess. Ampiasao izy ireo ho toy ny fipetrakao ary esory ny adiresy fitsidihana ao amin'ny tranokalanao WordPress.
2. Fidio ireo Plugins Spam Blocker
Marina fa maro ny plugins azo ampiasaina amin'ny WordPress mba hanakanana spam referral ho amin'ny ankapobeny. Fa rehefa mifidy plugin ianao dia tokony ho azonao antoka fa nahazo fampitandremana tsara avy amin'ireo mpampiasa teo aloha sy kintana dimy. Azonao atao ny mampifanaraka ny sehatra mifototra amin'ny anaranao sy ny keyword ary ny tranonkalan'ny tranonkala.
3. Ny sivana amin'ny Google Analytics
Alohan'ny hieritreretanao ny fanivanana ao amin'ny Google Analytics, avelao aho hilaza aminao fa tsy hanakana ny spiders sy ny botsaka tsy hahatratra ny tranokalanao izany. Fa kosa, afa-tsy ny miala amin'ny fifamoivoizana sy ny sari-panavaozana tsy mety tratra izay mety nampidirina ny kaonty Google Analytics. Azonao atao koa ny manofa ny spam referendra amin'ny Google Analytics mba hiarovana ireo tranonkalanao WordPress amin'ny loza mety hitranga.
Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao, dia afaka manatona anay amin'ny fotoana rehetra na manontany ny manam-pahaizana WordPress izay hanampy anareo hahalala ny zava-drehetra momba ny fiarovana ny tranokala Source .